အိန္ဒိယကနေမီးဖိုချောင်ကောင်တာများတင်သွင်းရန်လုပ်နည်း | Flodeal Inc မှ.
သငျသညျစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း၏သွင်းကုန်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနိုင်, နှမျးဖတျကြောကျ, နှင့် Quartz ကိုတိုက်ရိုက်အိန္ဒိယကနေ. ကျနော်တို့အတွက် readymade မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်2စင်တီမီတာနှင့်3စင်တီမီတာအထူ. သငျသညျကိုအရွယ်အစားပေးပို့နိုင်ပါတယ်. သင်ကတိကျသောအရွယ်အစားနှင့်မြင့်မားပြီးအတွင်းကောင်တာများဝယ်နိုင်.
ကျောက်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းနှင့် Quartz မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မဆိုခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောများမှာ.
လှည့်ပတ် 88% အမေရိကန်အိမ်သူအိမ်သား Quartz ကိုအသုံးပြုသည်, 83% အမေရိကန်အိမ်သူအိမ်သားကျောက်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် 66% uses Marble as the main component for their Kitchen Countertop.
ဤရွေ့ကားထိပ်လည်း weatherproof နှင့် heatproof များမှာ. You can buy Granite countertops from India in different colors and variations.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်တော်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများကသာအနည်းငယ်အရောင်များလုပ်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ, သငျသညျမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအရွယ်အစားနှင့်အပြီးနှင့်အတူအိန္ဒိယကနေအားလုံးနီးပါးကျောက်အရောင်များကိုဝယ်နိုင် :
အပြာရောင်သဲခုံ (အပြာ Celeste)
Granite hasarich beauty that few other countertop materials can match. ကျောက်ကောင်တာများ၏ timeless aura နှင့်အယူခံညှို့.
အားလုံးအထက်ဖော်ပြပါကျောက်ကောင်တာများအမြင်အာရုံနောက်တစ်နေ့အဆင့်သင့်ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မီးဖိုချောင်ယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျတွင်ဤကောင်တာများဝယ်နိုင်2စင်တီမီတာနှင့်3စင်တီမီတာအထူ.
One container can carry up to 250 တဖဲ့ 8-8.5 ခြေဘဝါးက x 26 လက်မ x ကို2စင်တီမီတာသို့မဟုတ် 160 တဖဲ့3စင်တီမီတာအထူကောင်တာ.
စကျင်ကျောက်ကောင်တာများအလှအပနှင့်တောက်ပထိလူသိများကြသည်. Altho သောဤကျောက်ကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ခြစ်ကိုထမ်းများနှင့်မြင့်မားသောချောကြာနိုင်သည့်အနည်းငယ်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်. သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှအောက်ပါပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးစကျင်ကျောက်ကောင်တာများဝယ်နိုင်:
Black က Marinace
စကျင်ကျောက်မြင့်မားသောအပူခုခံခြင်းနှင့်ခြစ်ခုခံနှင့်အတူ coupled အံ့မခန်းအလှတရားကမ်းလှမ်း. ကျွန်ုပ်တို့၏စကျင်ကျောက်ကောင်တာများ quartzite နှင့်လျော့နည်းစကျင်ကျောက်များပို.
အဆိုပါ quartzite မသာဟာအလွန်ခက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချောကြာ. Marble countertops provide necessary luxury to any modern Kitchen.
One container of marble countertops can carry up to 260 pieces of the size 8-8.5 ခြေဘဝါးက x 26 လက်မ x ကို2အထိစင်တီမီတာနှင့် 170 တဖဲ့3စင်တီမီတာအထူ.
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုလိုအပ်သောပစ္စည်းနမူနာပေးပို့နိုင်ပြီးငါတို့သည်သင်တို့၏ညွှန်ကြားချက်နှုန်းအဖြစ်လင်းကျောက်ပြားကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. Quartz ကောင်တာများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်.
Quartz ကောင်တာများစျေးကြီးပေမယ့်စျေးနှုန်းတန်ဖိုးရှိများမှာ. ဤရွေ့ကားခိုင်ခံ့နှင့်စိတ်ကြိုက်များမှာ.
ကအလှတရားမှကြွလာသောအခါ Quartz ကောင်တာများကစကျင်ကျောက်ရန်ခွန်အားနှင့်အလားတူရူပမှကြွလာသောအခါ Granite ဆင်တူဂုဏ်သတ္တိများရှိ.
တစ်ဦးကသာမန် 20 ခြေဘဝါးကွန်တိန်နာသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် 270-280 အတွက် readymade လင်းကျောက်ကောင်တာများ၏အပိုငျးပိုငျး2ပတ်ပတ်လည်စင်တီမီတာအထူနဲ့ 175 တဖဲ့3စင်တီမီတာအထူ.
လုပ်ဆောင်နေသည် & ဖြတ်တောက်ခြင်း
ကောင်တာများ၏ processing နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနောက်ဆုံးပေါ်အလိုအလျောက်စက်ပေါ်ပြု. ဤရွေ့ကားစက်မြင့်မားတောက်ပြောင်နှင့်အတူပစ္စည်း polish နှင့်ပင်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့်ကောင်တာများ၏ loading နူးညံ့သိမ်မွေ့သောထုံးစံနှင့်အတူပြု. ကျနော်တို့ chipping ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာပြင်နှင့်အနားမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဆိုကြင်နာရှောင်ရှားရန်စတိုင်ရိုဖောင်းသေတ္တာများနှင့်သစ်သားသေတ္တာထဲမှာထုပ်ပိုးအောင်.
အဆိုပါကောင်တာများရဲ့မျက်နှာပြင်၏ပိုကောင်းကာကွယ်မှုများအတွက်ပလပ်စတစ်စာရွက်ထဲမှာပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်. အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကပြီးနောက်, အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောထုံးစံတွေနဲ့သေတ္တာထဲသို့ထည့်. သငျသညျစက်ယန္တရားများနှင့် forklifts သုံးပြီးသေတ္တာရြငျနိုငျ.
သင်တဦးတည်းကွန်တိန်နာအားလုံးကိုအထက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်သည်. ကျနော်တို့အထိရောထွေးနိုင်ပါတယ်5တဦးတည်းကွန်တိန်နာအတွင်းပစ္စည်းအမျိုးအစားများ. ဒါဟာသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့စတော့ရှယ်ယာများအတွက်အရောင်များကိုရွေးချယ်ဖို့တစ်ဦးလွှတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏.
ကောင်တာများ၏အရွယ်အစားဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်ကွဲပြားစေခြင်းငှါ. အခြို့သောတိုတောင်းရန်လိုအပ်သည်စဉ်တချို့က clients များမဟုတ်တော့ကောင်တာများချင်. ကျနော်တို့ 106 အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်″ အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှအစွန်း profile များကိုအတူကောင်တာများတွင်အရှည်.
သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေကောင်တာများတင်သွင်းဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူ info@flodeal.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်.